Apple MacBook | Ndinobva mac
Kurume 9, 2015 ichayeukwa nekuvhurwa kweMacBook nyowani, hongu, zita reiyi nyowani Apple komputa ndi: MacBook.
Tiri kutarisana nelaptop yeApple ine zviyero zvinoyemurika uye tinogona kutaura kuti tiri kutarisana neyakaonda Mac anozivikanwa kusvika parinhasi, kupfuura kunyange rakatetepa MacBook Air. Iyi MacBook ine 13,1mm gobvu, inorema chete 0,9kg uye ine 12-inch Retina kuratidza izvo zvichafadza vashandisi.
Chimwe chinhu chitsva mune aya maMacbook ndiyo yekuchinja trackpad, Force Kubata. Iyi trackpad nyowani inowedzera yunifomu yekudzvanya pamusoro penzvimbo dzese uye ma sensors matsva anowedzerwa kuti aone kusimba kwemushandisi kana achimanikidza. Kuzvimiririra kwemaawa gumi nepfumbamwe zvinoenderana naApple pachawo uye nyowani uye imwechete USB-C chiteshi ndiwo mamwe emashoko eiyi MacBook nyowani.
Tinogona zvakare kusimbisa kuti Apple inobvisa hunhu backlit logo kuseri kwechiso, timu iyi nyowani inowedzera imwe yakafanana chaizvo neiyo yazvino iPads uye inowanikwa mune matatu mavara: Sirivheri, Space Grey uye Goridhe.
Nhau nezveMacBook nyowani
Pano iwe unogona kuona dzese nhau dzinobuda zuva rega rega nezve iyo nyowani Apple MacBook.
12-inch MacBook vashandisi vanoongororwa neApple
kubudikidza Toni Cortes inoita 2 mwedzi .
Apple inogona kunge iri kufunga nezve kutangazve 12-inch MacBook. Akazvivhura muna 2015 uye ...
Vazhinji Vashandisi Vanotaura Zvisingawanzo Screen Screen Inotyora paNew Apple Silicon MacBooks
Vashandisi vakati wandei vari kuzivisa dambudziko rimwe chete nemaMacBook avo pamasocial network: iyo skrini inotsemuka isina ...
Iyo Cupertino firm ichangobva kuwedzera iyo MacBook Retina ne ...
MacBooks ine mini-LED skrini haizosvika kusvika 2022
kubudikidza Ignacio Sala inoita 4 mwedzi .
Nekuvhurwa kweiyo 12,9-inch iPad Pro ine mini-LED kuratidza, vashandisi vazhinji vakamirira kusvika ...
Chekutanga kirasi yekumhan'ara kupokana neApple yekubatanidzwa kweye butterfly keyboard muMacBook
kubudikidza Manuel Alonso inoita 6 mwedzi .
Iyo bhatafuru khibhodi yaifanira kuve (uye iri) yakaipa kwazvo kuti irambe ichitaurwa nezvayo. Saka…
Hinge isina mvura inogona kuzviita kuMacBooks
kubudikidza Manuel Alonso inoita 7 mwedzi .
Imwe yematambudziko makuru isu tinawo seMacBook varidzi (ini ndinofunga chero chero laptop, asi kunyanya ...
Apple Silicon MacBooks chengeta yakafanana 720p kamera
kubudikidza Toni Cortes inoita 11 mwedzi .
Kune zvinhu zvisina pfungwa kana tsananguro. Nezuro takaenda kuApple keyword uko matatu akaunzwa ...
A14X processor vakagadzirira maMacs matsva neApple Silicon
Sekureva kwesvikiro rinozivikanwa reDigiTimes, maApple A14X mapurosesa agadzirira izvozvi mamodheru eApple 12 ...
MacBooks kutengesa kuri 21% kupfuura gore rapfuura
kubudikidza Toni Cortes inoita 1 gore .
Muchikamu chechipiri chegore rino, Apple yatengesa angangoita mamirioni mashanu MacBooks. Ini pachangu ndinoiwana imwe ...
MacBooks anhasi ane yakasimba SSD yekuchengetedza. Zvimakanika zvakaoma zvinotyaira zvakaenda kare. Izvi zvinoreva kuti kune imwe chete ...
Apple inopa zano pamusoro pekushandisa kamera makavha eMacBooks
Tinobvumirana kuti zvese zvekudzivirira zvishoma. Asi ini ndinozviona zviri pachena kunyanyisa kuisa muvharo pane yako kamera ...
Iyo Mac bhatiri uye nhoroondo dzayo dzemumaguta